Qaabeynta saxaafada Soomaaliyeed waa bog ay habeeyeen Midowga Afrika iyo Qaramada midowbey Kooxdooda Taageerto Watfaafinta (AU/UN IST) taasoo laga heli karo khariido LAGU wada shaqeyo, diiwaan gelin buuxdo iyo dib u cusbooneysiin joogto ah kuna aadan saxaafadda Soomaaliyeed.
Waxaa kaloo looga gol leeyahay qaabeynta barnaamij suura gelinayo si guud iyo mid hal meel laga xukumo oo ay kuwada jiraan dhamaan bahda saxaafadda Soomaaliyeed, idaaco iyo xarun tefishan, saxaafada daabacan (wargeysyada) iyo kuwa onlineka ahba (websiteyada) ujeedada mashruuca qaabeynta saxaafadda Soomaaliyeed waa in la hor mariyo sida ugu wanaagsan ee dib lowgu muujin lahaa saxaafada Soomaaliyeed dhamaanba Bartamaha iyo Konfurta Soomaaliya, Puntlan iyo Soomaaliland intaba.
Soo ban dhigida iyo horumarinta saxaafada Soomaaliya dhamaanteed, dhan gobol iyo dhan aduunweyne waxaan radineynaa inaan gacan ka siino dadka ajaanibta ah ee daneeyo si ay u fahmaan fikir fiicana uga qaataan muuqaalka warbaahinta Soomaaliyeed iyo inay adeegsadaan si ay u hagto wixii kazoo galo Soomaaliya uguna xirmaan saxaafada Soomaaliya waxay tabineyso.
Qeybaha ugu muhiimsan ee ee bogan waa _Interactive Map- iyo tixraaca cinwaanda bogaga saxaafada taasoo diinwaan gelineyso magacyada warbaahinta oo ay ku jirto faahfaahinadooda, xarumahooda iyo tafaasiisha meelaha lagala xiriiri karo. Waxaa kale oon galinay nuqolo PDF ah oo ka hadlayo wararka qaabeynta saxaafada, taasoo laga soo dhiraan dhiriyay bayaano saxaafadeed oo la soo buux buuxiyay dibna naloogu soo celiyay.
Adeegsadeyaashu waxaa loo sheegayaa in warbixinada la galiyay bogan ay yihiin kuwo wali ay shaqo ku socoto oo aysan aheyn daabacadii kama danbeysta aheyd. Waxaan qireynaa dhibka naga qabsaday si aan u helno warbixino sugan ayadoo gaaritaanka goobaha juqraafiga aysan suura gal ka dhigeynin hubsashada ruuxa warka laga qaadanayo naf ahaantiisa.
Qulqulka ama habsami u socodka lagasoo bandhigay muuqaalka warbaahinta Soomaaliya ee xiligan waxay sabab u tahay dhibka iyo adeyga sida bandhiga warbaahintu u muuqaneyso taasoo inay kaalmada dhaqaale inay iyaduna soo qulqusho adkeyneyso. Shaqadu waa in la fahmaa inay tahay wax mar walbo u baahan in si joogto ah loo muraajaceeyo dibna loo cusbooneysiiyo.
Waxaan uga jeednaa bogan inuu noqdo mid sugan, dhinaca ka qeyb qaadashada wanaajinta warbaahintana wax ku soo biiriyo sida ugu fiican. Sidaa darteed waxaan soo dhaweyneynaa ka qeyb qaadasho kasta oo wax dhiseyso taasoo ka dhigi karto mashruucaan il wax laga qaato oo wax anfacdo iyo jawi ay ku wada hadli karaan ka qeyb qaadteyaasha iyo bulshada dhamaanba. Marnaba haa ka weecweecan inaad dareentid inaad tahay ruuxa bogan iska leh adigoo si joogto ah noogu soo direysid warbixinada ugu danbeeyo, wixii khaldan ee ku saabsan warbaahintana saxeysid, wixii faalooyin ahna noo soo qoreysid ama soo jeedin ku aadan ilo wax laga qaadan karo oo laga yaabo inaad hayso.